Imibongo egqibeleleyo yokuLindela abazali - Malunga Pregnancy
Imibongo egqibeleleyo yokuLindela abazali
Nokuba zibubudenge, iimvakalelo, okanye ezomoya, imibongo malunga nokulindela abazali bancede ukuveza zonke iimvakalelo isibini esihamba nazo njengoko zilungiselela ukwamkela umntwana kusapho lwazo. Nazi ezinye zeenkondlo zabazali abaza kuba zilungele ukuzisebenzisa njengevesi kwikhadi lokubulisa, aIsicatshulwa sephepha le-scrapbook, okanye ubugcisa bodonganursery yosana.
Imibongo ehlekisayo yokuLindela abazali
Ukukhulelwa lishishini elinobuzaza, kodwa oko akuthethi ukuba ngekhe ufumane uburharha kuloo meko. Thatha umoya, phumla, kwaye ucinge ngezinto ezithile ezimnandi zokukhulelwa.
Imibongo yokulindela oomama
I-5 iiDVD zokubeleka
Iimbali ezingama-28 zeentyatyambo kunye nezipho zokukhulelwa
Besingalindelanga ukuba Silindele
Besingalindelanga ukuba silindele,
Kodwa siphantsi kwaye yabona silapha.
Le yeyona nto inkulu kwaye, inyani, yoyikisa
Ukumangaliswa esakha sanako kude.
Ndiyathetha, ngaba unokucinga ukuba sobabini
Uxanduva lokukhulisa umntwana?
Singabantu abanobuvila xa sishiywe sodwa,
Ke oku kuzakubasendle.
Kodwa ndiqinisekile ukuba siya kudibana kwaye sinyukele kulo msitho
Kwaye siya kumthanda nalo mntwana.
Kwaye xa ukuhamba kusiba nzima,
Siza kumane sicela uncedo kuwe!
Iminqweno, iminqwenoukutya okungaqhelekanga kunye okumnandi.
Isisu sam esikhulelweyo sichaza ukuthanda kwam ukutya kunye nomoya wam.
Iipile kunye ne-ayisikrimu zizinto zam endizikhethileyo,
Nantsi i-crazier combos katata womntwana ekufuneka eyifumene.
I-cheesecake kunye ne-okra ethosiweyo
Ipayi yeLemon ene-mocha
I-pizza ifakwe kwi-Cheetos
Chocolate dip kunye Fritos
Ipeanut butter kunye nemayonnaise
Akukho nto ngaphandle kweminquma iintsuku ezintathu
Idonut egutyungelwe nge ketchup kunye ne mustard
Iinkuku zenkukhu ezifakwe kwi-custard
Isardard eqhotsiweyo kwi-batter yepancake ...
Hayi, ujongeka uluhlaza.
Yintoni ke ingxaki?
Imibongo yokuba umama olindeleyo ovela kumhlobo
Ukuba unomhlobo okhulelweyo, unokufuna uncedo oluncinci ukuze uthethe into ofuna ukuyithetha. Mhlawumbi enye yale mibongo iyakusebenzela.
Njengomhlobo wakho nomama ngokwam,
Makhe ndinike ingcebiso encinci.
Thatha ixesha lokutya kwezi nyanga zokukhulelwa
Ngenxa yokuba bazolile ngaphambi kwesiphango.
Ayikuko ukuba ukufumana umntwana ayisiyonto imnandi,
Kodwa ubomi buxakekile kwaye ixesha lakho alisengolakho.
Zithobe ngelixa unako.
Konwabele ukulungiselela abantwana bakho kwaye ukhethe iimpahla.
Qiniseka ukuba unekhamera elungileyo kuzo zonke ezo foto zixabisekileyo zizayo.
Eli xesha liya kubonakala lifutshane xa umntwana efika,
Ke sukuyivumela ukuba ikhawuleze idlule kuwe.
Lungiselela yonke imizuzu, onke amava alo mmangaliso ekwenziweni.
Nditsalele umnxeba naninina
ungaziva nini iinjana zihamba
Nokuba kunini na emini okanye ebusuku,
Unganditsalela umnxeba nanini na. Uyayazi loo nto, akunjalo?
Xa umntwana efika, uya kufuna uncedo oluninzi.
Ngubani olunge ngakumbi ukwenza loo nto ngaphandle komhlobo wakho osenyongweni- mna.
Ungandicela ukuba ndiyokuthatha izinto evenkileni.
Ukuba udiniwe, ndiza kuza ndikuncedise.
Ukuba ufuna ukulala kancinci, ndiza kumhoya umntwana.
Ndiya kuyibamba ngokusondeleyo kwaye ndiyigcine ngokukhuselekileyo.
Nobabini aniyi kuyenza le nto nodwa,
Nanini na xa undifuna, thatha ifowuni.
Unganditsalela umnxeba nanini na. Uyakhumbula oko, kulungile?
Ukulinda ukuba uMntwana afike
Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi ukukhulelwa akunakuze kuphele. Le mibongo yabelana ngombono wokuba kunokubanjani xa ulinde umntwana wakho omtsha ukuba afike.
Ukudala uBomi kuthatha ixesha
Iintsuku ukuya kwiiveki ukuya kwiinyanga,
Ixesha lihamba oh kancinci
Ukulinda Kuphele Ngoku
Inkqubela phambili kwezabasebenzi,
Ukuxhalabisa ukulinda umntwana ukuba avele,
Ngentlungu nganye entsha
Ngoku lixesha lokuba unyamezele
Ugqirha uthi umntwana uqala isithsaba.
Ukutyhala okumbalwa kunye nokuphefumla okunzima,
Ngokutyhala okulandelayo, wena nosana niza kudibana.
Imibongo yokuBhengezwa kokuKhulelwa
Olunye lolonwabo olukhulu lokukhulelwa luxelela wonke umntu omlindeleyo. Sebenzisa enye yezi zimfutshaneisimemezelo sokukhulelwaImibongo yokwenza umzuzu ubaluleke ngakumbi.
Isibhengezo sokukhulelwa seLimerick
Kwakukho isibini esasifuna umntwana
Kwaye ke bayeke iingcinga zabo zibaleke.
Bazama konke okusemandleni abo
Ukukhulelwa, kunye nabanye
Ngaba imbali ilinde ukuvela.
Iphupha lethu liza liyinyani
Elona phupha lethu likhulu ibikukudala ukubonakaliswa kothando lwethu.
Sele iqalile ...
Ukuba Nomntwana Kunye
Ukuba nosana kunye sesinye seziganeko ezinkulu kulo naluphi na ulwalamano. Faka enye yale mibongo kwileta yothando eya kwiqabane lakho.
Kwaye yeyona nto intle siyenzileyo.
Sithathe uthando lwethu,
Kwaye wadala ubomi
Yenziwe ngathi sobabini.
Yintoni enokuba ntle ngaphezu koko?
Uthando olungakumbi kwiNdlela
Ndiyakuthanda mna nawe,
Kwaye ndiyaluthanda olu sana lumnandi
Ukukhula ngaphakathi kum / wena.
Imibongo edumileyo yokuLindela abazali
Akukho nto intsha ngokubhalwa kwemibongo ngesihloko sokukhulelwa nokuba kunjani kubazali. Nazi ezinye zezona zidumileyo zadlulayo nezangoku.
UMaureen Hawkins ' Ummangaliso woBomi yenye onokuba sele uqhelene nayo. Kwimigca esixhenxe nje emfutshane, utyhila ubunzulu obupheleleyo bothando lomama olulindeleyo oluqala kwangaphambi kokouyilonokwandisa ukuzibophelela kobomi bonke.
izinto ezingahleliwe ukubhalela abahlobo bakho
Ngaphambi kokuba ukhawulwe,
Bendifuna wena ... '
UGenvieve Taggard's Ngomntwana Ichaza iimvakalelo zowasetyhini malunga nokutshintsha komzimba njengoko ukukhulelwa kwakhe kuhambela phambili.
'Ngoku ndiyacotha kwaye ndonwabile, ndithanda ilanga,
Njengesilwanyana esine sleek, okanye esidala ... '
USylvia Plath Ingoma yasekuseni Ngumbongo omnandi malunga neengcinga zikamama omtsha ngexesha lokuzalwa kunye neeyure zokuqala kunye.
Uthando lubeka wena njengewotshi yegolide ethe tyaba.
Umbelekisi waqhwaba iinyawo zakho, kunye nenkqayi yakho
Uthathe indawo yayo phakathi kwezinto ... ''
UWilliam Blake Uvuyo lomntwana Igama elinegama elifanelekileyo kwaye limalunga nengxoxo emnandi kakhulu, nengcinga phakathi kosana nonina.
Ndineentsuku nje ezimbini ndizelwe.
Uvuyo ligama lam ... '
UKevin Young's Ukulindela iklasikhi yanamhlanje imalunga nalawo mathuba okuphefumla phakathi kokukhangela ukubetha kwentliziyo yosana naxa ekugqibeleni ifunyenwe.
Ingcwaba, umfazi wam ulele ngasemva, izandla ziyawela
isifuba sakhe, ngelixa ugqirha ekhangela kwangethuba
yentliziyo yakho ... '
UPaul Muldoon Sonogram Omnye umbongo wale mihla othelekisa owomntwanaisonogram yokuqalaenye yenziwe kamva ekukhulelweni.
'Kwiiveki nje ezimbalwa ezidlulileyo, isonogram yesibeleko sikaJean
akufani nantoni na
njengemephu yesethelayithi yaseIreland ... '
Bhala eyakho imibongo
Ngelixa uninzi lwezixhobo ezikwi-intanethi zibonelela ngemibongo yabazali abalindeleyo, ungazama ukubhala owakho umbongo nokuba ngumbongo onesingqisho, a haiku okanye ivesi yasimahla . Nokuba awuzithathi njengomntu odala izinto, ukubhala imibongo isenokungabi nzima njengoko ulindele. Ukuba uthetha ngokusuka entliziyweni, umbongo wakho Qiniseka ukuba uya kuba sisikhumbuzo esikhethekileyo.
Abantwana'ingubo Ne Nwele Ngaphezulu Size Slideshows Gourmet Cookware And Accessories Spices And Seasonings Inja Ukufuya Nokukhulelwa
Ukucoca iidreyini ngeviniga kunye nesoda yokubhaka
ithetha ntoni iringi kumnwe ophakathi
uyifumana njani inki kwisomisi
indlela yokutsala ibhinqa lasearies
Iziselo ezilungileyo zoku-odola kwindawo yomfazi
ndingazifumana phi iikhethini zeshawari ezinde